Izixhobo zohlalutyo lweSemalt
Semalt Impumelelo yamabali
Ufuna isikhundla esiphezulu kuGoogle? I-Semalt.net sisisombululo esifanelekileyo seshishini lakho. Inezona zixhobo zinamandla kukunika uluhlu oluphezulu kuGoogle. Indawo inomsebenzisi kwaye inomdla kakhulu. Kwimbono enye, unayo yonke into oyifunayo ukuze uphumelele ezandleni zakho.
Izixhobo zokuhlaziya zeSemalt zifikeleleka ngokulula kwiwebhusayithi. Ufumana ukuba ubone iimveliso abanikezela ngazo, ngakumbi malunga nenkampani yabazali, amabali abo empumelelo kunye nezinto ezahlukeneyo onokuthi unxibelelane nazo. Unokukhetha ukungena okanye ukwenza iakhawunti ngeSemalt.net. Ukudalwa kweeakhawunti kukunceda ugcine iiprojekthi zakho ze-SEO eSemalt.
IZIXHOBO ZE-SEMALT ANALYSIS
Uhlalutyo lwewebhu lubandakanya ukuqokelela, ukunika ingxelo kunye nokuhlalutya idatha yewebhu. Yinkqubo entsonkothileyo enceda ekuboneni ukuba iwebhusayithi iyazifezekisa iinjongo neenjongo zayo. Ukusuka kwidatha ehlaziyiweyo, iindlela ezifanelekileyo zokuphucula iwebhusayithi ziyenziwa. Isixhobo sohlalutyo lweSemalt zezona zixhobo zinamandla zokukunceda wenze ezi kunye nezinye.
Izixhobo zokuhlaziya zeSemalt zahlulahlulwe zangama-4.
Kweli candelo, uya kufumana izixhobo ezifunekayo kuhlalutyo olubanzi lwewebhusayithi yakho. Icandelo leSERP linamacandelwana amathathu.
a. Amagama aphambili kwi-TOP: Apha uza kubona inani lamagama aphambili kwinqanaba lewebhusayithi yakho kwiGoogle TOP 1-100 iziphumo zokukhangela ezichasene nomhla wangaphambili. Ubuye ubone itshathi ebonisa inani lamagama aphambili kwiGoogle TOP ixesha elingaphezulu. Ngalesi sixhobo, unokujonga utshintsho kwinani lamagama aphambili akwindawo yakho kwi-TOP. Okokugqibela, unokujonga amaphepha afakwe kwiwebhusayithi yakho kunye nezikhundla zawo ze-SERP kwigama elingundoqo.
b. Amaphepha afanelekileyo: Apha, uya kunikwa ukuqonda ngamaphepha akho ahamba nokugcwala ukugcwala. Uyakufumana itshathi ebonisa utshintsho kwinani lamaphepha ewebhusayithi kwi-TOP ukusukela ekuqalisweni kweprojekthi yakho kude kube ngumhla. Uya kuba nakho ukwazi inani lamaphepha ewebhusayithi kwiGoogle TOP 1-100 iziphumo zokukhangela eziphilayo, ngokuchasene nomhla wangaphambili. Unokuyijonga njengetshathi yebar engafani nesishwankathelo samanani esiqhelekileyo. Kukho enye itshathi ethi ikwazise utshintsho kwiinombolo zamagama aphambili abhalwe kuwo kwi-TOP ukusuka kumhla wokuqaliswa kwamaphepha akho.
c. Ukhuphiswano: I- Semalt ikunika ukuqonda kwiiwebhusayithi zakho zokhuphiswano ukuze ufunde kuzo kwaye uhlengahlengise isicwangciso seshishini lakho ngoku. Oku kukunceda ufumane zonke iiwebhusayithi ezikwiGoogle TOP 1-100 yamagama aphambili afana nalawo enqanaba lewebhusayithi yakho. Uya kuboniswa ukuba yeyiphi indawo ekubekwa kuyo iwebhusayithi yakho phakathi kwabakhuphiswano bakho. Uya kunikwa ulwazi ngenani elipheleleyo lamagama aphambili ekwabelwana ngawo abo bakhuphisana nabo ubabeke kwi TOP. Kwakhona uya kufumana itafile apho unokufumana khona inani lamagama aphambili okwabiwe kwiwebhusayithi kunye nokhuphiswano lwakho kwiGoogle TOP. Ukusuka kule tafile, ukulandelela umahluko kwinani lamagama aphambili ekwabelwana ngawo ngokungafani nomhla wangaphambili kuba lula.
Kubalulekile ukuba ufumanise ukuba iGoogle ithatha iphepha lakho lewebhu likhethekile okanye alikho. Omnye umntu usenokuba ukhuphele umxholo wewebhusayithi yakho kwaye ukuba ezabo zezalathiswe ngokukhawuleza kunezakho, uGoogle uza kubeka iphepha lakho kwi-webgi yakhe kwaye uya kufaka ileyibhile yakhe eyona nto iphambili kuyo. Uya kufuna ukubeka esweni oku kuba uGoogle wohlwaya iziza ezinenombolo enkulu yomxholo. Apha uya kufumanisa ukuba iGoogle iyaliphatha iphepha lakho lewebhu njengomthombo owahlukileyo okanye hayi. I-Semalt.net ikuvumela ukuba ukwazi ukujonga umyinge wepesenti yakho yobungcali ukukunceda wazi ukuba iwebhusayithi yakho ithathwa njengeyingafaniyo okanye hayi. Amanqaku e-0-50% yinto ongafuniyo ukuba nayo-oku kuthetha ukuba uGoogle ucinga iphepha lakho lewebhu ukuba liphindwe kabini. Umyinge wama-51% -80% uthetha ukuba uGoogle ucinga ukuba iphepha lakho lewebhu liphinde libhalwe ngokutsha. Eli linqaku eliphakathi kodwa uSemalt unokukunceda wenze ngcono. Inqaku le-81% -100% luphawu oluhle lokuba wenza izinto apha. UGoogle uthatha umxholo wakho owahlukileyo. Oku kuphucula kakhulu umgangatho wakho.
Uya kufumana "umxholo" wesixhobo esikunceda ujonge wonke umxholo obonwa nguGoogle kwiphepha lakho lewebhu. Ikwabalaselisa iinxalenye eziphindiweyo zomxholo wephepha lakho.
Elinye isixhobo oya kusifumana siluncedo sisixhobo "sentsingiselo yentsingiselo" nesixhobo esizisa kuzo zonke iisayithi iGoogle ezithathela ingqalelo imithombo ephambili yomxholo wephepha lakho. Ikubonisa eyona nxalenye yomxholo wakho efumaneka kwezinye iiwebhusayithi ukuze ujonge kwezo ndawo ukonyusa umgangatho wakho wobunye. USemalt uneqela lababhali abaziingcali abanokukunceda ukuba wenze umxholo wephepha lakho ube ngokwahlukileyo kunokwenzeka. Banokuqhagamshelwa ngokulula kwi-semalt.net.
Abaphathi beWebhu kaGoogle
Emva kokungena ngemvume kwiakhawunti yakho kaGoogle, uya kuba nakho ukufikelela kwisixhobo sewebhu se-webmasters seGoogle. Kweli candelo, uza kubona indlela iwebhusayithi yakho ebonakala ngayo kwiziphumo zokukhangela kuGoogle. Izokukunceda uchonge imiba yokubonisa. Uya kukwazi ukungenisa iiwebhusayithi zakho kunye neesemaps njengoluhlu olupheleleyo kwaye ucele ukuhanjiswa kwabo ngokwezimpawu nguGoogle.
Uya kuba nokufikelela kwiimeta ezibonisa ukusebenza kwewebhusayithi yakho. Oku kunceda ukuchonga into oyenzayo elungileyo kunye nezinto ezenza ngokungalunganga ezithintela indawo yakho ukuba ibekwe kuGoogle TOP 1-100.
Isixhobo se-sitemap sikuvumela ukuba ungenise i-sitemap yewebhusayithi yakho kuGoogle ukuze ufunde ukuba zeziphi ii-sitemaps ezibhalisiweyo kunye nezo ezineempazamo.
Ukuhlaziywa kwesantya sephepha sisixhobo esinamandla esibonisa ixesha lakho lokulayisha iphepha, inani lokuphicothwa kophumeleleyo kunye nenani leempazamo onokulungisa. Esi sixhobo sikunika umyinge wepesenti kuzo zombini iidesktop kunye neenguqulelo ezikwiphepha lewebhu. Isantya sokulayisha iwebhusayithi yakho sichaphazela ubume bakho, ke le isixhobo asinaxabiso.
Inqaku le-0-49 libonisa isantya esikhawulezayo. Inqaku lama-50-89 libonisa isivinini esiphakathi sokuhamba kwamanqaku amanqaku aphezulu angama-90-100 sibonisa isivinini esihle.
I-Semalt ikunika ukuqonda ngendlela esebenziseka lula iwebhusayithi yakho ngokukhuphela inkqubo yokulayisha kwisiphequluli sedesktop kunye nesiphequluli seselula. Oku kunceda ukukubonisa ukuba siyenze kanjani iphepha lakho lewebhu ukuba likhuthazwe kuGoogle SERP.
Xa ungena kwiakhawunti yakho, usiwa kwidashboard yakho apho uya kufumana khona iindlela zokusebenzisa iifilitha ukufumana iiprojekthi zakho ezifunekayo kunye nokufumana idatha yangoku. Ungazihlela iiprojekthi zakho ngokongeza izilayi. Unokukhetha ukukhetha iiprojekthi zakho ngeendlela ezahlukeneyo zokubeka esweni inkqubela phambili kwiiwebhusayithi zakho.
I-Semalt inikezela ngeemveliso ezilungileyo kakhulu ze-SEO yokwenza kwakho. Iimveliso ezidwelisiweyo zibandakanya:
I-AutoSEO: Oku kunceda ukukunika ukuphuculwa kwewebhusayithi ngcono, ukuphucula ukubonakala kwewebhusayithi yakho, kunceda ukutsala iindwendwe ezintsha kunye nokwandisa ishishini lakho 'kubukho be-Intanethi. Iinkonzo ze-AutoSEO Semalt zibonelela yesibini ingekho.
I-SEO epheleleyo: Nge-SEO epheleleyo, iSemalt ikunika ukuphuculwa kwewebhusayithi okungcono, i-ROI efanelekileyo, ikunceda ukuba utyalomali kwikamva lakho ngobulumko kwaye unike iziphumo ezikhawulezayo, ezisebenzayo kunye nezide. Ungabekwa phakathi kwewebhusayithi zikaGoogle TOP ezili-100 xa usungula iphulo lakho elipheleleyo le-SEO ngoSemalt.
I-E-commerce ye-SEO: Awuyi kufumana umkhankaso ongcono we-SEO kwiwebhusayithi yakho ye-E-commerce kune-Semalt ye-E-commerce ye-SEO. USemalt ukwenza umsebenzi wakho kuwe - bazisa abathengi ngokwenyani! Banceda ukukhuthaza imibuzo ephambili yamagama asezantsi esantya esiphezulu ukwandisa ukubonakala kwabahambi, banika uhlalutyo lwe-niche kwaye uhlawula kuphela iziphumo.
Uhlalutyo: Izixhobo zokuhlalutya iwebhusayithi zeSemalt zikunceda ekubek 'esweni imakethi yakho, ukulandelela isikhundla seokhuphiswano lwakho malunga nolwakho kwaye bazise ulwazi oluphezulu lweshishini lohlalutyo. Uya kufumanisa ukuthengisa okutsha. Banokukunceda ukuba uguqule idatha yakho ibe ziifomathi zePDF kunye ne-EXCEL-ezo zinto zisindisa ubomi!
I-SSL: I- Semalt ibonelela ngokhuseleko kwiiwebhusayithi zakho. Oku kuqinisekisa ukhuseleko lwabucala lwabasebenzisi bakho. Uya kuba neendwendwe ezininzi ezivela kuGoogle kunye neGoogle Chrome ikunika umgca oluhlaza.
Emva kokujonga izixhobo kunye neemveliso kwaSemalt.net, siyahlangana noSemalt kumgangatho onzulu.
Apha ubona iqela labo elisebenzayo leengcali kwaye ujonge nembonakalo yeendawo zabo zokusebenza.
Iimveliso zikaSemalt zixabisa kakhulu-kuba ziyayifuna ishishini lakho. Kukho isicwangciso sakho ukuba ufuna ukusebenzisa iinkonzo zabo ngenyanga, rhoqo kwiinyanga ezi-3, kwiinyanga ezi-6 okanye ngonyaka.
Abathengi abonwabileyo bakaSemalt bakushiya ngomdla ukujonga amaxabiso aphezulu aguqukayo ukususela oko banikezela amashishini abo kwizandla ezikhuselekileyo zikaSemalt.
Ibhloko ye-Semalt ifumaneka kuye wonke umntu odinga ulwazi oluxabisekileyo malunga ne-SEO ukusuka kwiziseko ukuya kwiindaba zamashishini zamva nje.
Kwiziko loncedo likaSemalt, unokufumana uncedo ukuba unamathela.
Inkqubo yokuthengisa kwakhona
Ufuna ukwenza imali eyongezelelweyo? USemalt ukogubungele ngenkqubo yabo abathengisayo xa uthengisa iinkonzo zabo ze-topnotch ze-SEO.
IIKHODI ZOKUFUNDA KWESEMALT
Unokufumana ngaphezulu kwewebhusayithi ezingama-5000 ezithe zaba yimpumelelo kakhulu enkosi ku-Semalt. Ngaba awucingi ukuba lixesha lokuba iwebhusayithi yakho ikuluhlu?
ZUZA NGOKUGQIBELA NGESEMALT
Semalt yentlalo. Ungaqhakamshelana nabo kwimithombo yeendaba zentlalo, i-imeyile kunye nee-hotline zabo ziyafumaneka ngokunjalo. Unokuphosa ngedilesi yabo yokoqobo ukuba ubumelwane.
Umntu akanakukhanyela inyani yokuba uSemalt uzinikezele kakhulu kwimpumelelo yabaxumi babo ukusuka kwizixhobo ezinamandla abanike zona. Ngokuqinisekileyo i-Semalt yinto yokuhamba-kwizisombululo kwi-hub yazo zonke izinto ezinxulumene ne-SEO. Ngokuqinisekileyo ishishini lakho lisezandleni ezikhuselekileyo.